အနည်းဆုံး လုပ်ခကို ကျပ် ၄၈ဝဝ အဖြစ် လုပ်ခ သတ်မှတ်ရေးကော်မတီ အတည်ပြု၊ အစိုးရအဖွဲ့၏ အတည်ပြုချ?? - Yangon Media Group
မြန်မာနိုင်ငံရှိ အလုပ်သမားများအတွက် နေရာဒေသနှင့် လုပ်ငန်းအမျိုးအစားမခွဲခြားဘဲ တစ်နိုင်ငံလုံးတစ်ပြေးညီ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်သည့် အဆိုပြုအနည်းဆုံးအခကြေး ငွေအား မူလကြေညာထားသည့် တစ်နာရီကျပ် ၆ဝဝ နှင့် အလုပ်သမားများ၏ အလုပ်ချိန်ရှစ် နာရီသတ်မှတ်ပြီး တစ်ရက်အတွက် ကျပ် ၄၈ဝဝ ကို အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ကြောင်း အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးသိန်းဆွေက ပြောကြားခဲ့သည်။
ယနေ့နံနက်ပိုင်း နေပြည်တော် အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာနတွင်ပြုလုပ်သည့် အနည်းဆုံးအခကြေးငွေသတ်မှတ်ရေးဆိုင်ရာ အမျိုးသားကော်မတီ၏ ပဉ္စမအကြိမ်ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးအပြီး နိဂုံးချုပ်အမှာစကားတွင် ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေက ”ဒီနေ့မှာတော့ အနည်းဆုံးအခကြေးငွေကို အားလုံးတညီတညွတ်တည်း သတ်မှတ်နိုင်ခဲ့ ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းဟာ ကျွန်တော်တို့ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့မှာရှိတဲ့ တာဝန် ရှိတဲ့ အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနအပါအဝင် အခြားသောဝန်ကြီးဌာနတွေကလည်း ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အများကြီးဆွေးနွေးပေးပါတယ်။
အကြံဥာဏ်တွေလည်း ပေးပါတယ်။ အလားတူပဲ တိုင်း ဒေသကြီး ပြည်နယ်တွေမှာရှိတဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်များအပါအဝင် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးများကလည်း ဒေသမှာရှိတဲ့အသံများကိုနားထောင်ပြီး ကိုယ်တိုင်ကွင်းဆင်းပြီး အဆင့်ဆင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အတွက် ဒီလိုအခြေအနေကို ရောက်ရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အလားတူပဲ အလုပ်ရှင်များရော အလုပ်သမားအဖွဲ့များပါ ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ခဲ့တာနဲ့အညီ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးတော့မှ သူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေ၊ လိုအပ်ချက် တွေ ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကို လည်းထင်ဟပ်နိုင်အောင် ပြောကြားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ မူဝါဒတစ်ခုချမှတ်မယ်၊ ကိန်းဂဏန်းတစ်ခုသတ်မှတ်မယ်ဆိုရင်လည်း သဘောတူ လက်ခံတဲ့သူတွေရှိသလို၊ အခက်အခဲရှိတဲ့သူတွေလည်းရှိမှာပါ။ ဆန့်ကျင်တဲ့သူလည်းရှိမှာပါ။ သို့ရာတွင် ကျွန်တော်တို့ အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကိုရှေ့ရှုပြီးတော့မှ အကောင်းဆုံးရည်မှန်းချက်တစ်ခုအကောင်း ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချတဲ့နေရာမှာတော့ အများစုလက်ခံနိုင်တဲ့ အများစုသဘောတူညီတဲ့အချက်ကိုပဲ ဆုံးဖြတ်ချက်ချကြတာ ဒီမို ကရေစီအနှစ်သာရရဲ့တစ်ခုပါပဲ။ ဒီနေရာမှာလည်း အဓိကကတော့ လုပ်ငန်းခွင်တည်ငြိမ်အေးချမ်း ရေးနဲ့ လုပ်ငန်းခွင်သာယာဝပြော ရေးကိစ္စပါ အလုပ်သမားတွေရဲ့ အကျိုးစီးပွားရော၊ လုပ်ငန်းရှင် တွေရဲ့ အကျိုးစီးပွားသည် နိုင်ငံ တော်ရဲ့အကျိုးစီးပွားနဲ့ တစ်ထပ်တည်းကျနေပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ဒီနေ့မှာ ကျွန်တော်တို့ မူလ ကြေညာထားတဲ့အတိုင်းပဲ တစ်နာရီမှာ ကျပ် ၆ဝဝ နဲ့ အလုပ်သမား တွေ အလုပ်ချိန် ၈ နာရီသတ်မှတ် ပြီးတစ်ရက်အတွက်ကျပ် ၄၈ဝဝ ကို အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်” ဟု ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေက ပြောကြားခဲ့သည်။
ယင်းအတည်ပြုနှုန်းထားသစ်သည် အလုပ်သမား ၁ဝ ဦးနှင့်အထက်ရှိ လုပ်ငန်းများအားလုံးအကျုံးဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ အတည်ပြုချက်နှင့်ပတ်သက်ပြီး အလုပ်ရှင်အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းများရဲ့သဘောထားများနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက ”တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ဝန်ကြီးတွေကတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွင်းမှာရှိတဲ့အလုပ်ရှင်တွေရောအလုပ်သမားတွေရောသွားပြီးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်။ အလုပ်ရှင်တွေကတော့ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခက်အခဲရှိတယ်လို့တင်ပြတယ်။ သို့သော်လည်းအများစုက ဒီဟာသင့်တော် ပါတယ်လို့လက်ခံထားတယ်။ တချို့ ကလည်း အနည်းဆုံးအခကြေးငွေဆိုတာကိုသိပ်သဘောမပေါက်တဲ့အတွက်၊ လက်ရှိရထားတဲ့လုပ်ခလ စာတွေကများနေတယ်။ ဒီအနည်း ဆုံးအခကြေးငွေသတ်မှတ်လိုက်ရင်ပဲ ရမှာလားလို့စိုးရိမ်ကြတယ်။ ဥပမာသတ္တုတွင်းကပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ရေလုပ်ငန်းက ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပေါ့။အဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ဘူး။ အနည်းဆုံး အခကြေးငွေဆိုတာ ဘာမှမကျွမ်းကျင်သေးတဲ့စပြီးအလုပ်ဝင်တဲ့အလုပ်သမားတွေအတွက် သတ်မှတ်တာ ဒီထက်ပိုပြီးလုပ်ခလစာအခွင့် အရေးတွေရကြပြီးသားအလုပ်သမားတွေဆိုရင်ရတဲ့အခွင့်အရေးကိုဆက်ပြီးရခွင့်ရှိတယ်။ ရပြီးသား လူတွေကလျော့သွားစရာအကြောင်း မရှိဘူး”ဟု မီဒီယာများ၏ မေး မြန်းခြင်းကို ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။
ယင်းနှုန်းထားကို မတ် ၅ ရက်တွင် နေပြည်တော်အလုပ်သမား လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့ အင်အားဝန်ကြီးဌာနရုံး အမှတ် (၅၁)တွင် ပြုလုပ်သည့် အနည်းဆုံးအခကြေးငွေ သတ်မှတ်ရေး အမျိုးသားကော်မတီ၏ ပဉ္စမအကြိမ်မြောက် ကော်မတီအစည်းအ ဝေးတွင် အတည်ပြုသတ်မှတ်လိုက် ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ”ကော်မတီအနေနဲ့ ကျပ် ၄၈ဝဝ ကို အတည်ပြုလိုက်ပါပြီ။ အခုအတည်ပြုတဲ့သတ်မှတ်ချက်ကို စီးပွားရေးကော်မတီကို ထပ်ပြီးတင်သွားမယ်။ ပြီးရင် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ရုံးကိုတင်ပြသွားမယ်။ နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံးက သမ္မတကြီးရဲ့ခွင့်ပြု ချက်နဲ့အတည်ပြုထုတ်ပြန်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်ကတော့ ဧပြီလဆန်းလောက်ဖြစ်မယ်လို့တော့ ခန့်မှန်းတယ်” ဟု အနည်းဆုံးအ ခကြေးငွေ သတ်မှတ်ရေးအမျိုး သားကော်မတီအတွင်းရေးမှူး အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဝင်းရှိန်က ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ မတ် ၅ ရက်က အတည်ပြုပြောသည်။ ယင်းအဆိုပြုနှုန်းထားသတ်မှတ်ချက်အပေါ် တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ် ၁ဝ ခုမှ ကန့်ကွက်လွှာပေါင်း ၄ဝ၉၂ ခု၊ ထောက်ခံလွှာ ၁၁ ခုတို့ ရှိခဲ့ပြီး အနည်းဆုံးအခကြေးငွေ သတ်မှတ်ရေးအမျိုးသားကော်မတီဝင်တို့၏ အကြံပြုချက်များနှင့်အတူ ထိုသို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယခုသတ်မှတ်ခဲ့သည့်ကျပ် ၄၈ဝဝကိုအစိုးရမှ အတည်ပြုပါက အစိုးရဝန်းထမ်းတွေနှင့် သက်ဆိုင်မှုရှိမရှိနှင့်ပတ်သက်ပြီး သတင်း ထောက်များ၏မေးမြန်းခြင်းကို ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက”အစိုးရ ဝန်ထမ်းတွေကတော့ သတ်မှတ် ထားတဲ့ဟာတွေရှိပါတယ်။ ဒါက တော့ စီမံဘဏ္ဍာဝန်ကြီးနဲ့ဆက် လက်ညှိပြီးမှ ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အခုချိန်ကတော့ ပြင်ပပုဂ္ဂလိ ကလုပ်ငန်းတွေအတွက်သာဖြစ်ပါတယ်။ အစိုးရဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ အစိုးရအဖွဲ့တွေနဲ့ဆက်လက်ပြီး စဉ်း စားသင့်တဲ့အချိန်မှာ စဉ်းစားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်”ဟုပြန်လည်ဖြေ ကြားခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် အနိမ့်ဆုံးလုပ်ခကို ၂ဝ၁၅ ခုနှစ်တွင် ၃၆ဝဝ ကျပ်အဖြစ် စတင်သတ်မှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ယခုအတည်ပြုလိုက်သော ထိုနှုန်းထားသစ်ကို မကျေနပ်သူများအနေနှင့် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပ ဒေနှင့် ပြည်ထောင်စုတရားစီရင် ရေးဥပဒေတို့နှင့်အညီ ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်သို့ စာချွန် တော်အမိန့်တစ်ရပ်ထုတ်၍ ပြင်ဆင်ပေးရန် လျှောက်ထားနိုင် ကြောင်း အနည်းဆုံးအခကြေးငွေ သတ်မှတ်ရေးဥပဒေပုဒ်မ (၁၁)အရ သိရသည်။
အီတလီ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပ၊ ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဘာလူစကိုနီ အနိုင်ရသော်လည်း အမတ်နေရာ တစ်ဝက်ေ?
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့် NLD ပါတီကို လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာတွင် ညစ်ညမ်းစာသားမျာ
အလောင်းတော်ကဿပ ဘုရားဖူးလမ်းမပေါ်ရှိ ပုထိုးလုံးချောင်းကိုဖြတ်၍ကြိုးတံတားတစ်စင်းကို တစ်လအတ